“Canug ayaan dhalay aniga oo aanan uur isku ogeyn, caadadana aysan iga joogsan” |
“Canug ayaan dhalay aniga oo aanan uur isku ogeyn, caadadana aysan iga joogsan”
Daisy Young ma aysan ogeyn iney uur leedahay balse afar saacadood kaddib markii ay booqatay isbitaalka iyadoo ka cabaneysa calool ayaa loo sheegay iney uur leedahay ayna halkaasi ku dhashay wiil. Iyada iyo hooyadeed Maggy ayaa sheekadooda BBC-da la wadaagay.
Maggy ayaa sheegtay iney meelka kale ku maqnayd markii ay gabadheeda farrin ugu sheegtay iney isbitaalka joogto.
“Markii ay ii sheegtay iney jooogto isbitaalka waxaan markiiba ku fakaray iney shil gaari gashay”
‘Waan wacay, waxayna ii sheegtay iney canug dhashay’ Waan aamini waayay, waxaan ku iri waan ku faraxsanahay’.
“Seeygeeyga Graham oo aan isla joognay baan markiiba ku jeestay oo aan ku iri, waxaad noqotay awoowe’. ‘Hadal wuu ka soo bixi waayay balse wajigiisa ayaan ka akhristay inuu aad u faxay’.
“Waxaan maalin ka hor dareemayay xanuun la mid ah kan caadada balse waxba kama soo qaadin laakiinse xanuunka ayaa habeenkii igu sii siyaaday kaddibna waxaan booqday isbitaalka waxayna dhakhaatiirta ii sheegeen inaan uur leeyahay waan aamin waayay waxaana ku iri taasi suuuragal maahan.”
“Iskumaanan arag wax calaamad ah oo muujinaya inaan uur leeyahay, sababtoo ah waxaa si joogta ah igu dhacayay dhiigga caadada, balse waxaan dareemay uun inaan yara cayilay taasina waxaan ku sababeeyay shaqada aan ka bilaabay maqaayadda McDonald”.
“Kumbuyuutar ayaa caloosha layga saaray kaddibna waxay dhakhaatiirta ii sheegeen inaan leeyahay 37 isbuuc oo uur ah, xanuunka i hayana uu yahay xanuunka foosha. “Aad ayaan u naxay balse saacado kaddib waxaan dhalay wiil aan u bixiyay Elijah John oo uu culeyskiisa ahaa 3kiilo garam.”
“Waxaan iri ‘Yaa Allaah, Waxan dhalay canug, waan soo qaaday oo waxaan saartay dhabta. Xitaa oohinta way ig soo bixi weyday, aad ayaana u naxsanaa waxaana jeclaa iney hooyadeey ila joogta balse nasiib darro taasi ma aysan dhicin oo waxaa nakala xayiray dhibaatada fayraska corona.
Suuragal matahay inaadan ogaan inaad uur leedahay?
Waa marxalad dhif iyo naadir oo ku dhacda haweenka, waana wax dhici kara oo ilaa 2,500 oo canug ayaa sannadkasta sidaan ku dhalata dunida.